सैन फ्रांसिस्को ब्रिज | यात्रा समाचार
स्यान फ्रांसिस्को पुल शहरको पोष्टकार्ड हो जुन प्रत्येकले पश्चिम तटमा बसाई सडकमा घर लिन्छन् किनकि यो एक पर्यटन गन्तव्य हो जुन एक बर्षमा १० करोडभन्दा बढी मानिसहरूले भ्रमण गर्दछन्।.
क्यालिफोर्नियाको मारी काउन्टीलाई सान फ्रान्सिस्कोसँग जोड्ने ईन्जिनियरि ofको यो उपलब्धि यसको रणनीतिक स्थान र यसको विशिष्ट रंगको कारण एक प्रतिमा भएको छ। रातको समयमा, दिनको प्रायः र सधै कुहिरोमा, सैन्य फ्रान्सिस्को खाडीमा यसको निर्माण पछि फिल्म निर्माताहरू, लेखक र रचनाकारहरूले ठूलो संख्यामा पुल बनाएका छन्।
यो एक झोलु bridge्गे पुल हो जुन गोल्डन गेट स्ट्रेट पार गर्दछ, लगभग kilometers किलोमिटर लामो च्यानल, जुन शहरको खाडी प्रशान्त महासागरसँग जोडदछ। यसको निर्माण हुनुभन्दा अघि त्यहाँ नियमित फेरी सेवा थियो तर स्पष्टतः पूलको आवश्यकता अपरिहार्य थियो। २ of को संकटले निर्माणमा ढिलाइ गर्यो तर अन्तमा १ 29 1933 मा शुरू भयो र १ 1937 XNUMX मा समाप्त भयो।
आज तपाईं पैदल यात्रा वा साधारण पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ वा बाइक चलाउन वा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आफ्नै आगन्तुक केन्द्र ऐतिहासिक जानकारी र स्मारिका बिक्रीको साथ छ। यो कार्यालय बिहान9देखि साँझ। सम्म खुल्ला छ र बाहिर अक्सर अन्तर्क्रियात्मक प्रदर्शनहरू छन्। हप्तामा दुई पटक नि: शुल्क गाईड टुरहरू छन्, बिहिबार र आइतवारहरूमा।
यो गोल्डन गेट ब्रिजको बारे के हो जसले यसलाई भिन्न बनाउँछ?
यो स्ट्रेटको नाममा बनेको छ जुन योमा निर्माण गरिएको छ। तर किन गोल्डन गेट? कप्तान जोन सी। फ्रिमन्टले १ 1846 तिर बप्तिस्मा लिएका थिए किनकि यसले उनलाई इस्तानबुलको क्रिसोसेरस वा गोल्डेन हर्न भनिने बन्दरगाहको सम्झना गरायो।
यसको उल्लेखनीय डिजाईन आर्किटेक्टका एक जोडी, इरिइtr र गेर्ट्रुड मोरोको काम हो, जसले पैदल यात्रीहरूको लागि रेलिंगलाई सरलीकृत गरे, जसले गर्दा दृश्यमा बाधा नपर्न सक्छ।
जनवरी January, १51933 मा सुरु भएको र यस पुललाई मे २ 28, १ 1937 XNUMX मा सवारीसाधन यातायातका लागि खोलिएको थियो, यसको निर्माण मात्र चार बर्ष भयो।
पानीमा यसको झुण्डिएको भागमा यसको अनुमानित लम्बाई १,२1.280० मिटर छ, यो २२ meters मिटर अग्लो दुई टावरहरूले स्थगित गरेको छ, जसमा प्रत्येकको लगभग 227०० हजार रिभेटहरू छन्।
यस स्थानको अधीनमा रहेको बतास र ज्वारहरूले यसको निर्माणको लागि इस्पात तारलाई अत्यधिक लम्बाइको लागि प्रयोग गर्‍यो, पृथ्वीलाई तीन पटक घेराउन पर्याप्त छ। त्यतिबेलाका ईन्जिनियरहरू र इकोलोजिस्टहरूको शंकाले निर्धारण गर्‍यो कि यी तारहरू आवश्यक भन्दा पाँच गुणा कडा थिए।
सुन्तलाको छनौट गर्दा नारंगी छनौट गरिएको थियो किनकि यसले प्राकृतिक वातावरणसँग राम्रोसँग मिल्छ, किनकि यो भूभागको रंगसँग मिल्दोजस्तो न्यानो रंग हो, आकाश र समुद्रको चिसो र toको विपरित। यसले ट्रान्जिटमा रहेका जहाजहरूका लागि उत्तम दृश्यता पनि प्रदान गर्दछ।
यसको उपस्थितिको लागि धेरै मेहनत आवश्यक पर्दछ: तपाईंको पेन्टिंग लगभग दैनिक हेरचाह गर्नुपर्दछ। वायुको नुन सामग्रीले यसलाई बनाउने इस्पात घटकहरू कोरिड्स गर्दछ।
योसँग छ वटा लेनहरू छन्, प्रत्येक दिशामा तीन, र पैदलयात्रीहरू र साइकलहरूको लागि अन्य विशेषहरू। पैदल यात्रीहरू र साइकल चालकहरू दिनमा फुटपाथमा पार गर्न सक्दछन्। हप्ताका दिनहरूमा, पैदल यात्रीहरू र साइकल चालकहरूले पूर्वी फुटपाथ साझा गर्दछन्, तर सप्ताहन्तमा साइकल चालकहरूले पश्चिम फुटपाथ प्रयोग गर्दछन्।
यसको निर्माण भएदेखि, यसले १ 1989। In मा सान फ्रान्सिस्कोमा प्रख्यात ठूलो भूकम्प जस्ता विभिन्न भूकम्पहरूको प्रतिरोध गरिसकेको छ। थप रूपमा, तेज बतासको कारण यो केवल तीन पटक बन्द भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » सैन फ्रांसिस्को ब्रिज